बेसार, अदुवा खाए कोरोना निको हुन्छ भनेर हेलचेक्राइ नगर्नु : 'चम्सुरी' (भिडियोसहित)
बेसार, अदुवा खाए कोरोना निको हुन्छ भनेर हेलचेक्राइ नगर्नु : ‘चम्सुरी’ (भिडियोसहित)
Team Khabar बिहिबार, आषाढ ११, २०७७
कति कलाकारहरुको खास नाम एउटा हुन्छ र दर्शकले चिन्ने नाम बेग्लै । हास्य कलाकारितामा पनि त्यस्तै एक रुचाइएको पात्र हो चम्सुरी । उनै हास्य कलाकार पल्पसा डंगोल उर्फ चम्सुरीसँग कलाकारिताको यात्रा र समसामयीक विषयमा सहकर्मी बिगेन तुलाधरले गर्नुभएको कुराकानी :
चम्सुरी अर्थात पल्पसा डंगोलको समय लकडाउनमा कसरी बितिरहेको छ ?
नियमित तालिकामा धेरै परिवर्तन आएको छ । बिहान उठ्यो, खाना खायो, फेरी खाजा के खाने भन्ने टेन्सन । पहिले भए काँहा के काम छ, कुन शुटिङ्ग छ भन्ने हुन्थ्यो । सुरुसुरुमा त आनन्दै भयो, त्यसपछि भने गाह्रो भयो । त्यसपछि कौशी खेती गर्न थाले, अलिकति समय त्यता व्यस्त भइयो । मुख्य कुरा स्वास्थ्य नै हो । अहिले फेरी हल्का शुटिङ्गहरु पनि शुरु भएको छ ।
लकडाउनमा केही स्लिम हुनु भएको हो ? वजन घटेको जस्तो देखिन्छ ।
अलिकती वजन घटेर पनि फेरी बढेको हो अहिले । घटेर ६५ केजी भएको थिए फेरी ६९ केजी भएकी छु ।
कलाकारलाई शरिर मेन्टेन गर्न कति जरुरत हुन्छ ?
कलाकारलाई मात्र होइन, सबैलाई नै आफ्नो शरिर मेन्टेन गर्न जरुरत छ । मोटोपनासँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरु पनि आउदै गर्छ । चरित्र अभिनय गर्ने भएका कारण मलाई मोटो शरिर नै बढी सुहाउछ । तर स्वास्थ्यलाई ध्यनमा राखेर शरिर घटाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईको कलाकारिताको यात्रा कहाँबाट सुरु भयो ?
सन् १९९५ को मिस नेपालमा भाग लिएसँगै कलाकारितामा प्रवेश गरेकी हुँ । एसएलसी सकेर नृत्य सिके । त्यो बेला मिस नेपालको फर्म भरे । छनौटमा पर्छु जस्तो पनि लागेको थिएन । तर छनौटमा परेँ । मिस नेपाल हुन नसके पनि बेष्ट ड्रेसको अवार्ड पाएँ । त्यहिबाट यात्रा सुरु भयो ।
कलाकारितामा लागेर जीवनयापन गर्न कति सहज या असहज छ ?
धेरैले यहि सोध्ने गर्छन् । एउटै सिरियल गरेर आनन्दले बसेर त गाह्रो छ । मेरो कुरा गर्दा त, म जे छु यहि कलाकारिता क्षेत्रबाटै हो । आर्थिक होस या सामाजिक पाटो, दुवै कलाकारिता कै कारणले हो । म नृत्य पनि गर्छु । एउटा विद्यालयमा नृत्य प्रशिक्षण पनि दिइरहेकी छु । बालबच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढाउन, राम्रो खान मलाई पुगेको छ ।
कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीमा धेरै कलाकारले राहत वितरण गरे । तपाईले पनि यस्तो केही कार्य गर्नु भयो ?
मैले नगरेको चिजलाई गरे भन्दिन । भुकम्पको समयमा धेरै गरियो । साच्चै भन्नु पर्दा कोरोनाको डरले पनि बाहिर निस्किन सकिएन । लकडाउनलाई पुर्णरुपमा पालना गरेर घरमै बसे । बच्चाहरु सानो छ, आफूपनि प्रेसरको औषधी खाइरहेकाले पनि बढी सतर्कता अपनाउनु पर्यो । गरेकै छैन पनि नभनौँ । ४/५ दिन नयाँ बजारको सासा बैँकेटमा खाना खुवाउन चाहिँ गएँ म । समाजिक दूरी कायम गरेर । त्यो बाहेक मैले केही गर्न सकेको छैन ।
नेपाल भाषाको पनि राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ । नेपाल भाषाको कलाकारिताको बारेमा पनि केहि भन्नुहोस न ?
धेरै अगाडि सत्य धरोहरा भन्ने चलचित्र निर्माण गरेको थिएँ मैले । धेरैले मन पनि पराइदिनु भयो र एउटा अवार्ड पनि हात पार्न सफल भएकी थिए । एउटा फेरी आर्को चलचित्रको निर्माण गरेकी छु । एडिटिङ्गको कार्य बाँकी छ, कोरोनाले रोकिरहेको छ । आफ्नो मातृभाषामा काम गर्न पाउदा मनमा आनन्द आउँछ तर आर्थिक पाटो अलिकति कम हुन्छ । नेपाली भाषमा काम गर्दा आर्थिक पाटो पनि मजबुत हुन्छ । नेपाल भाषाको दर्शक अलिकति कम भएको कारणले हो । त्यहि पनि मैले बनाउन चाहिँ छाडेकी छैन ।
कलाकारिता क्षेत्रमा कतिको असर परेको छ कोरोनाका कारण ?
कलाकारिता क्षेत्र मात्र नभएर संसारमै असर परिरहेको छ । रिलिज हुन लागेको चलचित्रहरुलाई कति घाटा भएको छ । बन्दै गरेका चलचित्रहरुलाई असर पुगेको छ । मैले नै दुईवटा चलचित्रमा एग्रिमेन्ट गरेर पैसा लिइसकेकी छु, उहाँहरुलाई पनि कति असर पुगेको होला । सिरियलहरु भन्दा चलचित्रहरुलाई गाह्रो भएको छ ।
तपाईको रिल छोरी ज्वाई धुर्मुस सुन्तलीले गरिरहेको समाज निर्माणको कार्यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
ठूला नेताहरुले गर्न नसकेको कार्य उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ । हास्य कलाकार, त्यो माथी पनि मेरो छोरी ज्वाई भएर खेलेको मान्छे हुदा मलाई गर्व लाग्छ । कति ठाँउमा जादा तपाईको छोरी ज्वाईले यस्तो गरेको छ भन्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा म पनि उनीहरुको अभियानमा सरिक भइरहेको हुन्छु ।
मुलाको साग अर्थात सुरेन्द्र केसीसँग तपाईको वास्तविक सम्बन्ध कस्तो छ ?
उहाँ पनि घर परिवार भएको मान्छे, म पनि घर परिवार भएको मान्छे । मुलाको सागको छोरी ज्वाई र मैले सँगै स्कुल पढेको, सँगै एसएलसी दिएको । अब आफै सोच्नुस । म उहाँलाई दाइ भनेर सम्मान गर्छु, उहाँ मेरो दाइ नै हो ।
जसरी माया दिइरहनु भएको छ, त्यसै गरी माया दिइरहनु । कोरोनाबाट बच्नुहोस । सुरक्षित भएर बस्नुस । बेसार, अदुवा खाए अब निको हुन्छ भनेर हेलचेक्राइ नगर्नु । संसारलाई नै सून्य बनाएको रोग हो यो । धेरै टेष्ट नभएर मात्र हो, भयो भने भयावह स्थिती आउछ । त्यसैले हेलचेक्राइ नगर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।